The Buddha (BC 623-BC 543) : အကောင်းဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ Buddhism is the best religion အပိုင်း (၂) by-Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
Buddhism is the best religion အပိုင်း (၂) Part 2
တကယ့် ငြိမ်းချမ်းမှု ဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်
အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ အကောင်းဆုံး ရပ်တည်နိုင်သည့် ဘ၀ က အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဘဝကို အဆုံးစွန်သောဘဝ ၊ ပြည့်စုံသော ဘဝဖြစ်ပြီဟု လူသည်ထင်မြင်ကျေနပ်ခြင်း ရှိကောင်းမှရှိပေလိမ့်မည် ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူဆိုသည်မှာ ပင်ကို အနုသယအားဖြင့် ရှိနေသော လောဘ ၊ ဒေါသ ၊ မောဟ တရားတို့ကြောင့် မည်သည့်အခါမျှ ကျေနပ်ရောင့်ရဲတတ်သည့် သတ္တဝါ မဟုတ်သောကြောင့်ပင်တည်း ။ ခက်သည်က ကိုယ်ရပ်တည်သည့်ဘဝ ကိုယ်မသိတာက ခက်နေသည်။ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် မသိတော့ ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ဖော်ရပေမည်နည်း?။
ဘဝ ဆိုသည် စကားလုံးကို အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုတာကို ဖတ်ဖူး, ကြားဖူးကြပေသည်။ တစ်ချို့ ဘဝဆိုတာ တိုက်ပွဲ၊ တချို့က ရုန်းကန်ခြင်း၊ တချို့က ဖြည့်ဆည်းခြင်း၊ တချို့က ပေါင်းစည်းခြင်း စသည်ဖြင့် ဖွင့်ဆိုကြပေသည်။ (ဤကဲ့သို့ ဖွင့်ဆိုကြခြင်းသည်၊ ကိုယ့်ရှုဒေါင့် ကိုယ့်အမြင် ကိုယ့်ခံစားချက်ရှိသလို ဖွင့်ဆိုကြခြင်းဖြစ်ပေသည်)။ ဘဝကို ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သည့် ရှုဒေါင့်မှ ကြည့်တတ်သော သူများက ဘဝဟူသည် ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ချမ်းမြေ့ခြင်း၊ သာယာကြည်နူးခြင်းဟု ဖွင့်ဆိုကြပေသည်။
သို့ဖြင့် ဘဝအဓိပ္ပါယ်ကို ခြုံငုံသုံးသပ် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြရသော် ရုပ်၊နာမ် သဘာဝတရားတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ကြီးထွားခြင်း၊ ၎င်းရုပ်တရား နာမ်တရားတို့ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားအောင် ရုန်းကန်ကြရခြင်း၊ လှုပ်ရှားကြရခြင်း၊ ဖြည့်ဆည်းကြရခြင်း၊ ထိုသို့ ရုန်းကန်ရင်း ဖြည့်ဆည်းရင်း ဘဝ၏ သာယာမှုလေးများကို ရှာကြံ၍ ပျော်မြူးကြရခြင်း၊ ချမ်းမြေ့ကြရခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ဘဝကို ကြိုက်နှစ်သက်သော တဏှာဖြင့် ရုပ်နာမ် သင်္ခါရ သတ္တဝါတို့ဖြစ်ထွန်းရာ၊ ကျင်ရာလည်ရာကား၊ (၃၁)နေရာရှိပေသည်။ ထိုနေရာကို (၃၁)ဘုံ ၃၁ ဘဝဟုခေါ်ဆိုကြပေသည်။ ထို ၃၁ဘုံထဲတွင် သတ္တဝါများသည် နိုင်ငံတကာ လှည့်လည်ခရီးသွားနေသူများပမာ ဘုံတကာ လှည့်လည်၍ မမောနိုင် မပန်းနိုင်သော သံသရာ ခရီးကို မငြီးတမ်းသွားနေကြရပေသည်။
နိဗ္ဗာန် ဟူသည် ပါဠိစာလုံး နိဗ္ဗာန ဟူသော ပုဒ်မှ လာသည် ။ ငြိမ်းအေးသည် ဟု ဆိုလိုသည် ။ ထို့ကြောင့် လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ မီးများကို ငြိမ်းသတ်နိုင်ခြင်းသည် နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည် ။ (ရတနသုတ်တွင် တွေ့နိုင်သည်။) တဖန် နိဗ္ဗာန ဟူသော ပုဒ်သည် ပါဠိဘာသာ နိ+ ဝါန =နိ နှင့် ဝါန ကို ပေါင်းထားခြင်းဖြစ်သည် ။ နိ - မရှိ၊ လွတ်မြောက်ခြင်း ၊ ထွက်ခွာခြင်း ။ ဝါန - တဏှာ ။ နိဝါန = နိဗ္ဗာန = တဏှာမရှိခြင်း ၊ တဏှာမှ ကင်းလွတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိဗ္ဗာန် ဆိုသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ အစွန်းစွန် ဘာသာရေးရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပေသည်။ မဟာယာနနှင့် ထေရဝါဒ ဟူ၍ဂိုဏ်းကြီး နှစ်ခုကွဲသကဲ့သို့ နိဗ္ဗာန်နှင့် ပတ်သက်သော အယူအဆမှာလည်း ကွဲပြားသည်။ မဟာယာန ကျမ်းများတွင် နိဗ္ဗာန်ကို သုခချမ်းသာတို့ဖြင့် ပြည့်စုံသည့် ဘုံဗိမာန်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ သံသရာကိုယ်၌ကပင် နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း ကွဲပြားသော အယူအဆများ၊သဘောတရားများကို တင်ပြထားသည်။ သို့သော် ထေရဝါဒတွင်မူ ဆရာစဉ်ဆက် နှင့် ကျမ်းဂန်များတွင် နိဗ္ဗာန်သည် တည်နေရာဘုံအဖြစ် မယူဆ၊ မသတ်မှတ်သင့်ကြောင်း၊ သံသရာနှင့် ဆက်စပ်မှုကင်းမှ သာလျှင် နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ကြောင်း အစရှိသဖြင့် တိကျစွာရှင်းလင်းပြဆိုထားပေသည်။
ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်အရ ၃၁ ဘုံ၌ ရှိကြသော သတ္တဝါတို့သည် သံသရာလည်ကြရာတွင် ၃၁-ဘုံမှ စိတ်၏ လုံးဝ ချမ်းသာရာဖြစ်သော ကိလေသာများမှ လွတ်ကင်းရာကို နိဗ္ဗာန်ဟု ခေါ်သည်။ နိဗ္ဗာန်တွင် လူတို့၏ ဒုက္ခအားလုံးမှ ကျွတ်ငြှိမ်းပြီး နိဗ္ဗာန် သို့ရောက်ရှိပြီးနောက် သံသရာ အသစ်တဖန်ပြန်လယ်ခြင်း မရှိတော့ပေ။
အချုပ်အားဖြင့် နိဗ္ဗာန်ဆိုသည်မှာ တက်မက်မှု၊ တွယ်တာမှု ကင်းရာ(မဖြစ်ရာ) ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဘဝတစ်ခုနှင့် တစ်ခုကို ဆက်စပ်ပေးတတ်သော တက်မက်မှု (တဏှာ) မဖြစ်ရာ ကုန်ဆုံးရာ (တဏှာ)မှ လွတ်မြောက်ရာ လွတ်မြောက်ကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။
နိဗ္ဗာန်သည် ကောင်းဘုံကဲ့သို့ နေရာအဖြစ် မရှိပေ။ နိဗ္ဗာန်သည် ဥပခါပြုခြင်းကဲ့သို့ သံသရာ နှင့်ဆန့်ကျင်ဖတ်ဖြစ်သည်။
၃၁) ဘုံ မှ လွတ်မြောက်ရာကား ရုပ်နာမ်ချုပ်ငြိမ်း ဒုက္ခသိမ်းသည့် တကယ့် ငြိမ်းချမ်းမှု ချမ်းသာဖြစ်သော နိဗ္ဗာန် ဖြစ်ပေသည်။ ထိုနိဗ္ဗာန်သို့ ထွက်မြောက်နိုင်ရာ ဘုံဌာနကား ကာမသုဂတိ (၇)ဘုံ၊ အသညသတ်မှ တပါး၊ ရူပ (၁၅)ဘုံနှင့် အရိယာ အရူပ (၄)ဘုံတို့ဖြစ်ကြလေသည်။ အသညသတ် ဘုံ၊ အပါယ် (၄)ဘုံတို့ကား နိဗ္ဗာန်သို့ တိုက်ရိုက်မသွားနိုင်ပေ။
ထိုသို့ နိဗ္ဗာန်သို့ တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သော ဘုံဘဝ အများအပြားရှိသော်လည်း ပရဟိတ အများအကျိုးဆောင်ရွက်ရာ၌ လူ့ဘဝသည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အများကို ကယ်ဆယ်နိုင်သော ဘဝဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားတိုင်းသည် လူ့ဘဝမှာသာ ပွင့်ကြပေသည်။ ယခု အကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ၃၁ ဘုံတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သော လူ့ဘဝဘုံဌာနမှာ ရောက်နေကြပေသည်။
လူ့ဘုံဘဝတွင် ရောက်ရှိနေခိုက် ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ကောင်းမှုတရားများ (To do good things) ကျင့်ကြံရုံသာမက မေတ္တာတရား၊ မင်္ဂလာတရားစသော ကောင်းမှုတရားများနှင့်သာ နေထိုင်အသက်ရှင်ခြင်း၊ စိတ်ထားဖြူ စင်ခြင်း (Purify the mind) မဂ္ဂင် ၈ ပါး၊ သစ္စာ ၄ ပါး စသော တရားတော်များကိုပါ ထိထိရောက်ရောက် ကျင့်ကြံအားထုတ်ကြပြီး မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်သို့ လျင်မြန်စွာ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ပြုစွမ်းနိုင်သူများအဖို့သာ လူ့ဘဝသည် အကောင်းဆုံးတို့၏ အကောင်းဆုံးဟူ၍ ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လူ့ဘဝရောက်ပါလျက် မကောင်းသောစိတ်ထားရှိခြင်း၊ အကျင့်စာရိတ္တဖောက်ပြန်ခြင်း၊ အကုသိုလ်တရားများ ပွားများခြင်း (Doing bad things) စသော မကောင်းမှုများကိုသာ ပြုမူနေပါက ထိုသူများကို လူ့ဘဝရောက်ရှိရခြင်းနှင့် မထိုက်တန်ဟု နားလည်ရပါမည်။ အရှုံးနှင့်သာ ကြုံတွေ့ရမည်သာဖြစ်ပြီး နောင်တမလွန်ဘဝတွင်လည်း မကောင်းသောဘုံဘဝသို့ ရောက်မည်မှာ သေချာလှသည်။
မင်္ဂလာတရား (၃၈) ပါး (Discourse of Mangala 38)
1. Asevanā ca bālānam- Not to Associate with Fools
2. Panditānañca sevanā- To Associate with the Wise
3. Pūjā ca pūjaneyyānam- To Honour Those Worthy of Honour
4. Patirūpa desavāso ca- Living inaSuitable Locality
5. Pubbe ca katapuññatā- Good Deeds Done in the Past
6. Attasammāpanidhi - Setting Oneself in the Right Course
7. Bāhusaccañca- Great Learning
8. Sippa- Practical Skill
9. Vinayo ca susikkhito- A Highly Trained Discipline
10. Subhāsitā vācā- Well-spoken Speech
11. Mātāpitu upatthānam- Looking After One’s Mother and Father
12. Puttadārassa sangaho- Caring for One’s Wife and Children
13. Anākulā ca kammantā- Unconfused Actions
14. Dānañca- Generosity
15. Dhammacariya- A Righteous Life
16. Ñātakānañca sangaha- Caring for One’s Relatives
17. Anavajjāni kammāni- Blameless Actions
18. pāpa Āratī- To Abhor All Evil
19. pāpa viratī- To Avoid All Evil
20. Majjhapāna samyamo- Abstention from Intoxicants
21. Appamādo ca dhammesu- Diligence in Righteousness
22. Gārava- Reverence
23. Nivāta- Humility
24. Santutthi- Contentment
25. kataññuta- Gratitude
၂၆။ ကာလေန ဓမ္မဿဝန = သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အ ခါ၌ သူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူခြင်း
26. Kālena dhammasavana- Hearing the Dhamma at the Right Time
27. Khantī- Patience
28. sovacassatā- Compliance
29. Samanānañca dassana- Seeing the Monks
၃၀။ ကာလေန ဓမ္မသာကစ္ဆာ = သင့်တင့် လျောက်ပတ်သော အခါ၌ တရားတော်ကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း
30. Kālena dhammasākacchā- Opportune Discussion of the Dhamma
31. Tapo- Self-restraint
32. Brahmacariya- A Holy Life
33. Ariyasaccāna dassana- Seeing the Four Noble Truths
34. Nibbāna sacchikiriyā- Realising Nibbāna
35. Na kampati- When Affected by Worldly Conditions, if One’s Mind Remains Unshaken
36. Asoka- Sorrow-less
37. Virajam- Stainless
၃၈. Khemam- Secure
၁။ အသေ၀နာ စ
လူမိုက်ဆိုလျှင် ရှောင်သွေလွဲလို့ ၊ မမှီဝဲနဲ့ ကင်းအောင်နေ ။
ပညာရှိကို အရှည်တွဲလို့ ၊ မှီဝဲဆည်းကပ် နည်းယူစေ ။
သုံးပါးရတနာ မိဘများနှင့် ၊ ဆရာသမားကို ပူဇော်လေ ။
ချမ်းသာကိုပေး ဆက်ဆံရေး ၊ မြော်တွေး သုံးချက်ပေ ။
အဲဒါမှ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကမ္ဘာ့မင်္ဂလာတွေ ။
ကုသိုလ်ဥစ္စာ ပညာရဖို့ ၊ သင့်ရာဒေသ အမြဲနေ ။
ရှေးကတင်ကြို ပြုခဲ့ဘူးသည့် ၊ ကောင်းမှုအထူး ရှိပါစေ ။
မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်ထိန်းလို့ ၊ မတိမ်းစေနဲ့ ဆောက်တည်လေ ။
ဥစ္စာကိုပေး နေထိုင်ရေး ၊ မြော်တွေး သုံးချက်ပေ ။
တတ်ကောင်းတတ်ရာ ဟူသမျှကို ၊ ကြားမြင်သုတ ရှိပါစေ ။
အိုးအိမ်တည်ထောင် ၀မ်းစာရေးနဲ့ ၊ အသက်မွေးဖို့ အတတ်သင်လေ ။
လူနှင့်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များကို ၊ ကောင်းစွာသင်ကြား နားလည်စေ ။
မှန်ကန်ယဉ်ကျေး ချိုသာအေး ၊ ဆိုရေးတတ်ပါစေ ။
မြင်းမိုရ်ရွှေတောင် မိဘကြွေးကို ၊ ကောင်းစွာဆပ်ပေး ၀တ်ကျေကျေ ။
ကြွေးသစ်ချကာ သားနှင့်မယား ၊ မြှောက်စားချီးမြှင့် ၀တ်ကုန်စေ ။
အလုပ်တာဝန် မလစ်ဟင်းနဲ့ ၊ အပြစ်ကင်းအောင် လုပ်ပါလေ ။
စည်းစိမ်ကိုပေး ပြုစုရေး ၊ မြှော်တွေး သုံးချက်ပေ ။
သုံးတန်စေတနာ ဖြူစင်လန်းလို့ ၊ ပေးကမ်းဝေမျှ လှူနိုင်စေ ။
ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကြံ မမိုက်မှားနဲ့ ၊ သုစရိုက်တရားကို ကျင့်ပါလေ ။
ဆွေမျိုးတွေကို ပြင်ပ မထားနဲ့ ၊ သင်္ဂဟတရားနှင့် ချီးမြှောက်လေ ။
သန့်စင်ပြစ်မျိုး လူထုကျိုး သယ်ပိုးရွက်ဆောင်စေ ။
၆။ အာရတီ ၀ိရတီ
မကောင်းမှုတွေ ဟူသမျှကို ၊ မတွေ့ခင်က ရှောင်ကြဉ်လေ ။
တွေ့ကြုံလာလျှင် မလွန်ကျူးနဲ့ ၊ အထူးသဖြင့် စောင့်စည်းနေ ။
အရက်သေစာ မသောက်စားနဲ့ ၊ မှောက်မှားတတ်တဲ့ အရာပေ ။
လုပ်ကိုင်ပြောကြား သတိထား တရားမမေ့စေ ။
၇။ ဂါရဝေါ စ
အသက်ဂုဏ်ဝါ ကိုယ့်ထက်ကြီးက ၊ ဆည်းကပ်ခစား ရိုသေလေ ။
မာနတံခွန်ဂုဏ်မကြွနဲ့ ၊ ကိုယ့်ကိုနှိမ့်ချ အမြဲနေ ။
လောဘအပို လိုမလိုက်နဲ့ ၊ ကိုယ်ထိုက်တာနဲ့ ကျေနပ်လေ ။
ကိုယ့်ပေါ်ပြုဖူး သူ့ကျေးဇူး အထူးသိတတ်စေ ။
ကောင်းကျိုးဆင့်ပွား မြတ်တရား နာကြားမပြတ်ပေ ။
၈။ ခန္တီ စ
၀တ်စားနေထိုင် ရန်ခပ်သိမ်း ၊ စိတ်ကိုချုပ်ထိန်း သည်းခံလေ ။
ကျိုးကြောင်းပြညွှန် ဆုံးမစကား ၊ ပြောကြားလာက နာလွယ်စေ ။
သူမြတ်ပုဂ္ဂိုလ် ဟူသမျှ ၊ မကြာခဏ တွေ့ဆုံလေ ။
သဘာဝတွေး မှန်ကန်ရေး ဆွေးနွေးမပြတ်ပေ ။
၉။ တပေါ စ
လောကီအာရုံ ဇိမ်ယစ်မူးလို့ ၊ အပျော်မကြူးနဲ့ ခြိုးခြံလေ ။
မေတ္တာဗြဟ္မစိုရ် လက်ကိုင်သုံးလို့ ၊ သူမြတ်ကျင့်ထုံး ယွင်းမသွေ ။
လေးပါးသစ္စာ ဉာဏ်မြင်ကြည့်လို့ ၊ အမှန်သိအောင် ကြိုးစားလေ ။
ဒုက္ခလွတ်ကင်း နိဗ္ဗာန်ချည်း အလင်းပေါက်နိုင်စေ ။
ဆင်းရဲချမ်းသာ သဘာဝ ၊ တွေ့ကြုံနေကြ လူတိုင်းပေ ။
ကောင်းဆိုးနှစ်တန် အစုံတွဲလို့ ၊ တလဲစီလှည့် အမြဲနေ ။
လောကဓံကြုံ မဖြုံတမ်းပေါ့ ၊ မတုန်စမ်းနဲ့ စိတ်ခိုင်စေ ။
သောကကိုထိန်း ရမ္မက်သိမ်း အေးငြိမ်းချမ်းသာနေ ။
( မင်္ဂလာ ၏အကျိုး )
သုံးဆယ့်ရှစ်ဖြာ မင်္ဂလာကုံးကို ၊ လိုက်နာကျင့်သုံး ပန်သူတွေ ။
စီးပွားချမ်းသာ ကျက်သရေတိုးလို့ ၊ ကျောင်းကျိုးစည်ပွင့် တဝေေ၀ ။
ဘေးရန်ကင်းကွာ ချစ်သူပေါလို့ ၊ စိတ်ရော ကိုယ်ရော ချမ်းသာမလေ ။
ပြောဆိုကြံဆ ဆောင်သမျှ အောင်ရမည် ကိန်းသေ ။
အဲဒါကြောင့် ပန်ကြဆင်ကြ မင်္ဂလပန်းခိုင်တွေ ။
သစ္စာ (၄) ပါး(The Four Noble Truths)
ဆေးကိုစားလျှင် ဆင်းရဲရောဂါ အမှန်ပျောက်မည်၊ ဤနေရာ၌ ဆေးစားခြင်း ဆိုသည်မှာ လမ်းမှန်လိုက်ခြင်းပင်တည်း။ လမ်းမှန်လိုက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘေးအန္တရာယ် မကင်းသည် လက်ဝဲစွန်း၊ လက်ျာစွန်း၊ အစွန်းနှစ်ဘက်ကျသော လမ်းမဟုတ်၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းသော အလယ်လမ်းကို ဆိုလိုသည်။ အလယ်လမ်း ဆိုသည်မှာ - အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသော မဂ္ဂင်လမ်း တည်း။
နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်း မဂ္ဂင် ၈ ပါး(
(6) Right Concentration
(7) Right Thinking
မဂ္ဂင် (၈) ပါးတွင် သမ္မာဝါစာ သမ္မာကမ္မန္တ
နှင့် သမ္မာအာဇီဝ (၃) ပါးသည် သီလတရားစု Virtue or Morality (Sila) ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာဝါယာမ၊ သမ္မာသတိ၊ သမ္မာသမာဓိ (၃) ပါးသည် သမာဓိတရားစု Concentration or Mental discipline (Samadhi) ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ သမ္မာသင်္ကပ္ပ
္ပ (၂) ပါးသည် ပညာတရားစု Wisdom or Insight (Panna) ဖြစ်ပါသည်။
(The Middle Way and the Way of Righteousness)
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ အဓိက အခြေခံကျင့်စဉ်မှာ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ် (မဇ္ဈိမပဋိပဒါ) ဖြစ်သည်။ ထိုအခြေခံကျင့်စဉ်ကို ဘုရားရှင်သည် ဗာရာဏသီပြည် မိဂဒါဝုန်၌ ဟောကြားသည့် ပထမဦးဆုံး တရားတော်တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုလမ်းစဉ်သည် ကာမဂုဏ်အာရုံများကိုလည်း လိုက်စားမှု မပြု။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း နှိပ်စက် ညှင်းပန်းမှု မပြုရသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ အဓိက အခြေခံကျင့်စဉ် အလယ်အလတ်လမ်းစဉ် (မဇ္ဈိမပဋိပဒါ) ဖြစ်သည်။
ထိုအခြေခံကျင့်စဉ်ကို ဘုရားရှင်သည် ဗာရာဏသီပြည် မိဂဒါဝုန်၌ ဟောကြားသည့် ပထမဦးဆုံး တရားတော်တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုလမ်းစဉ်သည် ကာမဂုဏ်အာရုံများကိုလည်း လိုက်စားမှု မပြု။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း နှိပ်စက် ညှင်းပန်းမှု မပြုရသည့် အချက်ရှစ်ချက် ပါဝင်သော လမ်းစဉ် ဖြစ်သည်။
အစားအသောက် အနေအထိုင် အပျော်အပါး စသည်များကို လူ့သဘာဝအရ မကင်းနိုင်သဖြင့် ပြုလုပ်သော်လည်း အလွန်အကျွံ မဖြစ်ဖို့ အရေးကြီး၏။ အလယ်အလတ် မျှတဖို့ အရေးကြီး၏။ မျှတစွာ သုံးဆောင်ခံစားလျှင် ပျော်ရွှင်မှု သုခကို ရနိုင်မည် ဖြစ်၏။
- သမ္မာဝါစာ - သမ္မာကမ္မန္တ - သမ္မာအာဇီဝ - သမ္မာဝါယာမ - သမ္မာသတိ - သမ္မာသမာဓိ - သမ္မာသင်္ကပ္ပ - သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဆိုသည့် အချက်ရှစ်ချက် ပါသည့် လမ်းစဉ် ဖြစ်သည်။
(၄) အနှစ်သာရ မရှိသော ရောက်တတ်ရာရာ စကားများကို မပြောဆိုဘဲ မိမိသူတပါး နှစ်ဦးသားတို့ အကျိုးရှိမည့် စကားကို ပြောဆိုခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ သမ္မာကမ္မန္တ
(၃) လင်ရှိမယား၊ မယားရှိလင်၊ အိမ်ထောင်ရှင်များ နှင့် လိင်ဆက်ဆံမှု Adultery
မပြုရ။ ဇနီးမယား ၂ ယောက် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ယူခြင်း Bigamy ကို လုံးဝ မပြုရ။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း-လင်မယား-အများအပြားယူခြင်း Polygamy ကို လုံးဝ မပြုရ။ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုကို လုံးဝ မပြုရ။ Polygyny (မယားပြိုင်) နဲ့ Polyandry (လင်ပြိုင်) အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုကို လုံးဝ မပြုရ။ သူတပါး၏ သားပျို သမီးပျိုများကို အတည်တကျ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းလိုစိတ် မရှိဘဲ အပျော်သက်သက်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံမှု မပြုရ။ မိမိ၏ ဇနီးမယား လင်ယောက်ျားနှင့် သစ္စာရှိရှိ တလင်တမယား စနစ် Monogamy ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ် သုံးခုသည် လောကုတ္တရာရေးရာပိုင်းတွင် သမာဓိဆိုသည့် အပိုင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ သို့သော် ထိုလမ်းစဉ်များကို နေ့စဉ်ဘဝ လူ့လောကနယ်ပယ်တွင်လည်း အသုံးချ၍ ရနိုင်ပါသည်။ မိမိ၏ နေ့စဉ်ဘဝတွင် မိမိဘာလုပ်နေသည်ကို သိနေရမည်။
မိမိသူတပါး နှစ်ဦးသားတို့အတွက် ကောင်းတာ လုပ်နေတာလား၊ မကောင်းတာ လုပ်နေတာလား ဆိုသည်ကို သိနေရသလို အကျိုးရှိ,မရှိကိုလည်း သတိပြုမိဖို့ လိုသည်။ မိမိ၏ အပြောအဆို အနေအထိုင် အပြုအမူ အကြံအစည်များကို သတိနှင့် စောင့်ကြည့်၍ အပြစ်မရှိ ကောင်းမည့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့် အလုပ်များကို လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
ဤသို့ ပြုလုပ်လျှင် အရာရာတွင် အမှားနည်း၍ မိမိအတွက် အောင်မြင်မှု ရသကဲ့သို့ အခြားသူများကိုလည်း ထိခိုက်နစ်နာစေမည် မဟုတ်သဖြင့် သာယာချမ်းမြေ့သည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။ လောဘဖြစ်စရာ ဒေါသဖြစ်စရာ စသည့် မကောင်းသော အာရုံများကို အမှတ်ရနေခြင်းမျိုး (မိစ္ဆာသတိ) မဖြစ်စေဘဲ မိမိပြုလုပ်ခဲ့သည့် သူတပါးအကျိုး သည်ပိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်များကို သတိရနေလျှင်လည်း သမ္မာသတိ ဖြစ်နေပါသည်။ မိမိပြောဆို ပြုလုပ်သည့် ကိစ္စများတွင် တည်ကြည်မှု ခိုင်မာမှု ရှိရပါမည်။ ခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုး အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲ၍ သစ္စာမရှိ ကတိမတည်သည့် အဖြစ်ကို မရောက်စေရပါ။
ရုပ်တရား နာမ်တရားများ၏ သဘော သဘာဝနှင့် အဖြစ်အပျက် အဆက်အစပ်တို့ကို ကိုယ်တွေ့ မှန်ကန်စွာ သိနားလည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ သိနားလည်သည့်အခါ အရာရာတွင် တပ်မက်ခြင်း ကင်း၍ ဆင်းရဲခြင်းမှလည်း အပြီး လွတ်မြောက်ပါတော့သည်။ နေ့စဉ်ဘဝ၌လည်း မည်သည့်ကိစ္စမျိုးတွင်မဆို ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း မသိနားမလည်ခြင်း ကြောက်ရွံ့ခြင်းများကို အခြေခံ၍ မှားယွင်း ဘက်လိုက်မှု မရှိဘဲ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် မှန်ကန်စွာ ရှုမြင်သုံးသပ် ကျင့်သုံးနိုင်ရပါမည်။
ထို့ကြောင့် မဇ္ဈိမပဋိပဒါ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ် (ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ အခြေခံ အဓိကကျင့်စဉ်) ကို မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း နားလည်အောင် အသေအချာ လေ့လာ၍ အတိအကျ လိုက်နာကျင့်သုံး၊ အခြားသူများကိုလည်း လိုက်နာကျင့်သုံးစေရန် ပြောပြတိုက်တွန်းပေးခြင်းဖြင့် လောက သံသရာ နှစ်ဖြာသောဌာနတို့၌ အေးငြိမ်းမှုကို ရယူနိုင်ကြပါစေဟု ဆန္ဒပြုရပါတော့သည်။
အစားအသောက် အနေအထိုင် အပျော်အပါး စသည်များကို လူ့သဘာဝအရ မကင်းနိုင်သဖြင့် ပြုလုပ်သော်လည်း အလွန်အကျွံ မဖြစ်ဖို့ အရေးကြီး၏။ မဇ္ဈိမပဋိပဒါ အလယ်အလတ် မျှတဖို့ အရေးကြီး၏။ မျှတစွာ သုံးဆောင်ခံစားလျှင် ပျော်ရွှင်မှု သုခကို ရနိုင်မည် ဖြစ်၏။
စကားပြောရာတွင် ပြောသင့်သည့်စကား၊ မပြောသင့်သည့်စကားများနှင့် ဆက်လျဉ်း၍လည်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။
၁။ မဟုတ်မမှန်၊ အကျိုးမရှိ၊ သူတစ်ပါးတွေလည်းမကြိုက်တဲ့ စကားကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်မပြောပါ။
၂။ ဟုတ်မှန်၊ အကျိုးမရှိ၊ သူတစ်ပါးမကြိုက်တဲ့ စကားကိုလဲ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်မပြောပါ။
၃။ ဟုတ်မှန်၊ အကျိုးရှိ၊ သူတစ်ပါးမကြိုက်တဲ့စကားကို ပြောသင့်တဲ့အချိန်အခါကိုသိပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောပါသည်။
၄။ မဟုတ်မမှန်၊ အကျိုးမရှိ၊ သူတစ်ပါးကြိုက်တဲ့စကားကိုလည်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်မပြောပါ။
၅။ ဟုတ်မှန်၊ အကျိုးမရှိ၊ သူတစ်ပါးကြိုက်တဲ့စကားကိုလည်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်မပြောပါ။
၆။ ဟုတ်မှန်၊ အကျိုးရှိ၊ သူတစ်ပါးကြိုက်တဲ့စကားကိုလည်း ပြောသင့်တဲ့အချိန်အခါကိုသိပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောပါသည်။
ဒါကြောင့် အခြေအနေ၊ အချိန်အခါဟာ အရေးကြီးလှပါသည်။ အချိန်အခါမဟုတ်ပဲသွားပြောရင် စကားကောင်းပေမယ့် အကျိုးမပြီး၊ အချည်းအနှီးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပြောသင့်တဲ့အချိန် အခြေအနေရောက်မှပြောကြရပါသည်။
စကားကိုအတိုင်းအတာမရှိပြောလွန်းရင်လည်း အရှက်ရတတ်ပါသည်။ အလိုက်ကန်းဆိုးမသိပဲ ပြောတတ်သူတွေလောကကြီးထဲမှာ ရှိနေတတ်ပါသည်။ နားထောင်နေရသူရဲ့ဆန္ဒတွေကို မသိတတ်ကြတဲ့လူတွေကြောင့် နားထောင်ရသူတွေမှာ ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ စကားဆိုတာပြောချင်တိုင်း မပြောရပါ။ အခြေအနေ၊ အချိန်အခါကိုသိရပါတယ်။ အလိုဆန္ဒကိုလဲသိရပါသည်။
(၁) ပြောချိန်မရောက်သေးပဲ အတိုင်းအထက်အလွန်စကားပြောသူဟာ ဥသြမရဲ့သားလေးပမာ အသတ်ခံရတတ်သည်၊ အနှိပ်စက်ခံရတတ်သည်။
(၂) မကောင်းသဖြင့်ပြောဆိုအပ်တဲ့စကားဟာ အလွန်ထက်မြက်တဲ့ဓားနဲ့ လတ်တလောသေစေနိုင်တဲ့ အဆိပ်တို့ထက်လည်းပိုပြီး လျင်မြန်စွာသေစေနိုင်ပါသည်။
(၃) ဒါကြောင့်ပြောဖို့သင့်တဲ့အချိန်အခါမှာကော မသင့်တဲ့အချိန်အခါမှာပါ စကားကိုစောင့်ရှောက်ရပါသည်။ အလွန်မပြောရပါ။ မိမိနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောင်မှ အလွန်မပြောရပါ။
(၄) အသိဉာဏ်ကိုရှေ့တန်းတင်ပြီး စကားပြောတဲ့ပညာရှိဟာ ပြောသင့်တဲ့အချိန်မှာ စကားကိုနှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန်ပြောရပါသည်။ အဲဒီလိုပြောတဲ့ပညာရှိဟာ ဂဠုန်ကနဂါးကိုသုတ်ချီသလို ရန်သူအားလုံးကိုသိမ်းကျုံးယူနိုင်ပါသည်။
(၅) အချိန်မရောက်ခင်ပြောမိတဲ့စကားတွေကတော့ မကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ရင်ထဲမှာပြောချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်နေပေမယ့် အချိန်မရောက်သေးရင်မျိုသိပ်ထားနိုင်ကြရပါသည်။ အောင့်နိုင်လေလေအကျိုးရှိလေပါပဲ။
(၁) ပညာရှိ တို့ထံ အဖန်ဖန်မေးမြန်းခြင်း၊
(၄) ပညာမဲ့ ကိုရှောင်ကြည်ရခြင်း၊
(၅) ပညာရှိ ကိုမှီဝဲရခြင်း၊
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် မအိုမသေအမြဲနေရာနိဗ္ဗာန်ကိုပင် မြော်မြင်မှန်း၍ မရရအောင် အားထုတ်ကြကုန်သေး၏။ ယခုဘဝကြီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးလောက်ကိုပဇာမူ၍ ကြောက်ရမည်နည်း။
လုံ့လဝီရိယကင်း၍ အဖျင်းစားအပေါစားလုပ်နေသော်လည်း ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည် ပို၍မကျန်းမမာ ပို၍အသက်မရှည်တော့ပြီ။ စင်စစ်သော်ကား ပျင်းနေသည့်အတွက် ခန္ဓာကိုယ်မှအခိုးအငွေ့တွေ အပြင်သို့မထွက်ရသောကြောင့် အေးစက်စက်ဖြစ်ကာ ပို၍မကျန်းမမာဖြစ်သေး၏။ ထိုမကျန်းမာမှုကြောင့် အပျင်းထူသူမှာ အသက်တိုဖွယ်သာပိုများ၏။
ပျင်း၍အလုပ်မလုပ်သောသူသည် သာ၍ပျင်းစရာဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ လုံ့လဝီရိယမှန်မှန်ဖြင့်အလုပ်လုပ်နေသူကို လူတွေကလည်းကြည်ညို၊ နတ်တွေကလည်းစောင့်ရှောက်လို၏။ ရှေးကံတွေကလည်း အကျိုးပေးခွင့်သာ၍ လှလှပပအကျိုးပေးကြသည်။ ထို့ကြောင့်လုံ့လရှိသူအဖို့မှာ လောကကြီး၌ ပျော်စရာကိုသာတွေ့ရပါလိမ့်မည်။
ဤနေရာ၌ ရှေးကံအကြောင်းကို အနည်းငယ် ရှင်းပါမည်။ ရှေးကံများသည် အလွန်အားကောင်းသော ကံ သာမာန်လောက်သာအားရှိသော ကံ ဟု နှစ်မျိုးရှိ၏။ ထိုတွင်ပထမ ကံမျိုး၏အကျိုးပေးပုံသည် အလွန်ထင်ရှား၏။ ဒုတိယ ကံမျိုးမှာ မထင်ရှား။ သူများနည်းတူသာရစေနိုင်၏။ ထို ကံ သည်လူ့လောက၌ သူတို့ချည်းအကျိုးပေးဖို့ခက်ခဲသဖြင့် အကျိုးပေးခွင့်ရအောင် ဉာဏ်၊ ဝီရိယနှင့် သတိ ဟူသော ကောင်းသော ပယောဂ က ကူညီပေးရေးသည် အရေးကြီးလေသည်။
ထို့ကြောင့်လူတစ်ယောက်တွင် တစ်နေ့အဖို့၌ ကုသိုလ်၊ ဥစ္စာ၊ ကျန်းမာရေး၊ အတတ်ပညာ၊ တန်ခိုးဂုဏ်သိန် ဤ(၅)မျိုးတွင် တစ်မျိုးမျိုးမှအကျိုးမရပဲ ကုန်သွားသောနေ့သည် ဝမ်းနည်းစရာ လွန်စွာအသုံးမကျ၊ မသေခင်ကအသေဖြစ်ရသောနေ့ ပင်တည်း။
ထို့ကြောင့် ရှင်လျက် နှင့် သေသူမဖြစ်ရအောင် ယခုမှစ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလော့။
လယ်တီဆရာတော် ကမ္မဋ္ဌဌာန်းကျမ်း။ စာ-၁၉၃။